Ciidamada Booliska magaalada B/weyne ayaa maanta xaafada Kooshin ee magaaladaas ka tirsan ku qabqabtay rag la sheegay iney ka ganacsanayeen hilibka dameeraha.
Raggan oo ka koobnaa afar nin oo mid ka mid ah uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowlada ayaa markii la qabanayey waxay wateen hilibka iyo haraga dameer ay soo qaleen.
Mid ka mid ah raggan oo wax laga weydiiyey halka ay geyn jireen iyo cida ay ka iibiyaan hilibka dameeraha ayaa waxaa uu sheegay in hilibka dameeraha ay u isticmaalaan iney kalluun kaga dabtaan webiga Shabelle ee magaaladaas dhexmara, aysana jirin cid ay ka iibiyaan.
Saraakiisha ciidamada Booliska magaalada Beled-weyne ayaan la hadlin xariga raggan lagu eedeeyey iney ka ganacsanayeen hilibka dameeraha.
Waa markii ugu horeysay ee magaalada Belad-weyne lagu arko rag wata hilibka dameeraha oo aan ka mid aheyn xaywaanada hilibkoodu ay Soomaalidu cunto, waxaana arintan si weyn ula yaabay shacabka magaalada B/weyne.